बुधवार २३ भाद्र, २०७२ | राजनीति
तस्विरः फाइल फोटो
(थारू अराउण्ड वल्र्ड संस्थाको आयोजनामा भदौ २१ गते काठमाडौमा आयोजित संविधान निर्माणको वर्तमान परिप्रेक्षमा थरुहट आन्दोलन र सम्भावित निकास बिषयक् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेता लक्ष्मण थारुको बिचार । सार्वजनिक कार्यक्रममा यो अभिव्यक्ति दिएको दुइ दिनपछि भदौ २३ गते भैरहवाबाट निजलाई टीकापुर घटनाबारे सोधपुछको लागि पक्राउ गरिएको छ ।)
संविधान सभाको प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो । शायद यो संविधान साता दिनभित्र आउला । एमाले, कांग्रेससंग बहुमत छ । त्यसैले यो संबिधान जारी गर्ने अधिकार उनीहरुलाई छ । तर उनीहरुलाई दिइएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा चुकेका छन् । अहिले आएर नेकपा एमाओबादी पनि आफ्नो अधिकार उपयोग गर्नबाट चुकेको छ ।
तीन दलको सद्धबुद्धि पलायो भने....
अहिलेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण छ । जनसहभागितामय छ । एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीको सद्धबुद्धि पलायो भने पहाडमा चार प्रदेश र तराईमा तीन प्रदेश बनाउन सकिन्छ । जुन उहाँहरुले भनेजस्तै सात प्रदेशकै हुन्छ । झापादेखि सिरहासम्म पहिलो प्रदेश, धनुषादेखि पर्सा सम्म दोश्रो र कंचनपुरदेखि चितवनको माडीसम्म तेश्रो प्रदेश भए हुन्छ । नाममा हाम्रो केही बिवाद छैन । शेरबहादुर देउवा प्रदेश बनाए नि हुन्छ । तराईमा तीन प्रदेश भयो भने अहिलेको समस्याको समाधान हुन्छ । तराईका समुदाय पनि यसमा सहमत छन् ।
थारुहरु अहिले गर कि मर अवस्थामा छन् । अहिले थारुहरु निहथ्था छन । उनीहरुसंग हतियार छैन । तर आर्मीहरु बुट बजार्र्दै आएपछि, बन्दुक तेर्साएपछि थारुहरुले आफ्नो सुरक्षाको लागि के गर्ने ?
राजनैतिक आन्दोलन, राजनैतिक आन्दोलन
यो आन्दोलन राजनैतिक आन्दोलन हो । थारुका राजनीतिक सवाललाई राजनीतिबाटै समाधान गर्नुपर्छ । राजनीतिक सबाललाई बन्दुक तेस्र्याएर, एमालेका दुईचार सभासद किनेर, कांग्रेसका दुई चार जनालाई तर्साएर समस्या समाधान हुँदैन । अहिलेको मुद्दा राजनीतिक रुपमा हल गर्न खोजिएको छैन, सम्बोधन गर्न खोजिएको छैन । राज्य थारुहरु थाकून् भन्ने रणनीतिमा लागेको छ । राज्य अहिले पनि राजनैतिक आन्दोलन गर्न चाहँदैन । अहिले आएर एमाओवादी पनि आफ्नो मुद्धाबाट पछाडि हटेको छ ।
थारुहरु अहिले गर कि मर अवस्थामा
थारुहरु अहिले गर कि मर अवस्थामा छन् । अहिले थारुहरु निहथ्था छन । उनीहरुसंग हतियार छैन । तर आर्मीहरु बुट बजार्र्दै आएपछि, बन्दुक तेर्साएपछि थारुहरुले आफ्नो सुरक्षाको लागि के गर्ने ? आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि सरकारले सुरक्षा दिदैन भने हामीले के गर्ने ? सरकारले नै सुरक्षा बिथोल्छ भने के को जातीय सद्भाव ? के हो जातीय सद्भाव ? के थारुले सद्भाव बिगारेका हुन् र ? २०१७ देखि २०४६ सालसम्म सत्तामा क्षेत्रीहरु थिए । त्यो पनि जातीय सत्ता हो । ४६ सालको परिवर्तपछि बाहुनहरु सत्तामा आए । ८० प्रतिशत बाहुनहरुको हातमा देशको सत्ता छ ।
अब कैलालीमा नेपालको जम्मै आर्मी लगे पनि थारुले तोड्छ । नेताहरुको संकीर्ण मानसिकताले सबै कुरा बिग्रेको हो । टीकापुर घटना दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन, थाहा छैन । तर यो देशको सत्तामा बस्नेहरुलाई धेरै गाह्रो हुन्छ ।
जातीय सद्भाव बिगार्ने काम राज्यबाटै
अब कैलालीमा नेपालको जम्मै आर्मी लगे पनि थारुले तोड्छ । नेताहरुको संकीर्ण मानसिकताले सबै कुरा बिग्रेको हो । टीकापुर घटना दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन, थाहा छैन । तर यो देशको सत्तामा बस्नेहरुलाई धेरै गाह्रो हुन्छ । कांगेस, एमाले र माओवादीको नेता भनेर भ्रममा नबसे हुन्छ ।
टीकापुर घटनामा पुलिसलाई थारुले मारेकै होइनन् । भीडले प्रहरी कुल्चेर मरेका हुन् । ५० हजारको भीडलाई रोक्न सक्छ प्रहरीले ? त्यहाँ कुनै घुसपैठ थिएन । त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु । टीकापुरमा मिडियामा आए जसरी गाउँ गाउँमा पलायन पनि छैनन् । सत्य हो त्यहाँका युवा पलायन भएका छन् । जातीय सद्भाव बिगार्ने काम थारुले होइन, राज्यले गरिररहेको छ ।
प्रस्तुती ः वविता घिसिङ